Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FDI si Nigeria & ụwa | TAA
United States na-emepe emepe nchebe na Jerusalem May 14
Ụbọchị World Book: Dolapo Osinbajo na-akwado omenala agụmakwụkwọ n'etiti ndị Naijiria
Gọvanọ Amosun gwara ndị òtù ya ka ha hapụ ikike iwu dị na Ogun
Senator Melaye: Ndị uweojii nọchibidoro ebe obibi m
Ulo Oba Ego: Uzo ndi Naijiria zigara $ 22 ijeri ulo
2019: EU na-emesi INEC ike maka nkwado maka PWD
Akụkọ banyere nwa nke atọ na ezinụlọ Britain
Kate Middleton mụrụ nwa nwoke
#BBNaija: Ebuka nwunye eulogises hubby n'agbanyeghi ebubo na romance na Cee-C
Qatar Airways na-aghọ ndị na-akwado ndị uwe ọhụrụ nke Rom
€ 25,000 a nkeji Lionel Messi zooms gara aga Cristiano Ronaldo dị ka n'elu ...
Sevilla's Steven N'Zonzi rịọrọ mgbaghara maka ịbịaru egwu Copa del Rey.
Minista: Gomenti gọọmentị ga-adọta ngwa ngwa na ụlọ ọrụ ụgbọelu
Minista State, Aviation, Hadi Sirika, kwuru na Thursday, gọọmenti etiti gọọmenti kpebisiri ike ịmalite ịzụ ahịa na ịmalite azụmnta ego nke ndị mba ọzọ (FDI) n'ime ụlọ ọrụ ụgbọelu Nigeria.
Gọọmenti etiti gọọmentị na-amalite ọrụ njikwa ọchịchị
Gọọmenti etiti gọọmentị kwuru na ọ na-emepe Usoro System Management System (EDMS) ka ọ rụọ ọrụ niile nke ọchịchị.
Nigeria na-elekwasị anya na ndị na-etinye ego na United States na nnọkọ abụọ
Obodo ndi oru Naijiria atumatu uzo iji mee ka ndi oru ego nke United States n 'ogbako US-Nigeria Investment Summit na America ka ha nwekwuo mmasi itinye ego na aku na uba na Naijiria.
EMMAN: Usoro ikike iwu iwu ga-emepụta ohere ọrụ
Otu ndi na-emeputa elekota eletriki nke Naijiria (EMMAN) na Monday kwuru na iwu ohuru Meter Asset Regulation (MAP) na mpaghara ndi oru a ga-eme ka ndi oru Naijiria buru oke oru.
ERGP: Ụlọ ọrụ gọọmenti etiti obodo kwadoro iji rụọ ọrụ dị irè iji kwalite FDI - Okey Enelamah
Dr Okey Enelamah, Minista ahia, ahia na ulo ahia, n'ememme Friday kwuru na Gọọmenti Gọọmenti ga - ahụ ka mmejuputa mmezu nke Economic Recovery and Growth Plan (ERGP) iji mee ka ndị ọzọ na - emepụta ego (FDI).
Israel Premiya Benjamin Netanyahu nabatara oge ọhụrụ na agbata na India
Benjamin Netanyahu ama otoro "oge ohuru" n'isochi India na Monday ka o tinye aka n'usoro onu ahia n'oge nleta mbu nke onye Minista nke Israel no na 15 afọ.
NEPZA na-enye ikikere New Free Trade Zones bara uru maka $ 2.751
Onye isi nchịkwa nke Nigeria Export Processing Zones, NEPZA, Emmanuel Jime, na-ekwu na ikike enyela ikikere ọhụrụ Free Trade Zones, FTZs.
Bank of Agriculture na-ekpofu ego N1 na Kogi
Onye isi ochichi na onye isi ulo oru ugbo nke ulo oru ugbo, Mallam Kabir Muhammed Adam, ekwuola na otutu nde N1.4 abanyela na Kogi State kemgbe mmalite nke ulo oba na steeti.
President Buhari kwadoro N50 ijeri maka NEPZA iji wuo akụrụngwa
President Muhammadu Buhari kwadoro Ijeri N50 maka Ngalaba Na-ahụ Maka Mbupụ Mpụ na Nigeria, NEPZA, na atụmatụ 2018 iji wuo akụrụngwa bụ isi nke ga-adọta ntinye ego nke ndị mba ọzọ (FDI) n'ime mba ahụ.
Onye okachamara na-asọpụrụ gọọmenti etiti mba maka ịga nke ọma nke IWAF
Otu ọkachamara ụgbọelu, bụ Mr Nick Fadugba, jara Federal Government maka ụlọ ọrụ nchịkọta nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgbọ Na-ahụ Maka Ọgbọ Na-ahụ Maka Mba Ụwa (ICAO) bụ nke atọ kwubiri na Abuja.
Ufodu ndi Afrika na-eme ihe kariri onodu uwa - Yemi Osinbajo
Onye isi oche Yemi Osinbajo na Thursday na Abuja kwuru na aku na uba Afrika na-emewanyewanye ma na-eme karia n 'uwa anya.
Onye ụkọchukwu ikpe ziri ezi na-achọ ka a gbanwee ikpe
Chief Bayo Ojo (SAN), onye bụbu Attorney General na Minista nke Ikpe Ziri Ezi, na Wednesday, kwadoro iwebata Mkpebi Nkwekọrịta ọzọ (ADR) na mkpegharị ikpe site n'aka ndị ọchịchị obodo na gọọmentị etiti na mba ahụ.
Ezekwesili, Aig-Imoukhuede na-akpọ maka imepe emepe
Dr Oby Ezekwesili, onye isi ulo oru aku na uba maka Open Society Foundation na Mr Aigboje Aig-Imoukhuede, onye isi oche nke nzuko ahia Naijiria, kwuru na Tuesday na Naijiria choro onodu aku na uba ka oganihu.
Isi obodo batara na Nigeria na-amụba 95% na Q2 2017 - NBS
Uru nke isi obodo abanye na Naijiria na nkeji nke abụọ nke 2017 biliri site na $ 884.1 nde iji guzo na $ 1.79, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkwa nke Mba, NBS.
Kachikwu choro nnukwu onu ahia mmanu na $ 32 kwa agba
Minista Petroleum Resources, Dr Emmanuel Ibe Kachikwu, ekwuola nnukwu ego nke mmepụta mmanụ na 32 dollar kwa mbadamba, na-ekwu na ọ na-efu ego nke Investment Direct Investment (FDI) dị oke ọnụ.
Ụlọ ọrụ telivishọn na-adọta $ 68bn maka ego mba ọzọ - NCC
Ulo oru telecoms nke Naijiria adọtara $ 68 ka onodu aku na uba na ndi ozo di iche iche di iche iche di iche iche, FDI, ulo oru mgbasa ozi Naijiria, NCC, kwuru na Tuesday.
Iwu gị enweghị nkwado - PDP gbaghaara ọchịchị Buhari
Ndi isi ochichi nke ndi ochichi bu ndi ochichi nke bu Muhammadu buhari n'ihi na ha adighi-akwusi 'onodu aku na uba' nke o ketara site n'aka President Goodluck Jonathan mgbe o nwusiri nhoputa ndi ochichi 2015.
Ndị Italian na ndị na-agbachitere Njikọ Njikọ ndị Rom na-ekpe ikpe ga-eme ka ha mara na ọ bụ Qatar Airways ka ha ga-esi na-elekọta ha.
Obodo European Union Center for Electoral Support (ECES) kwusiri ike na Ụlọ Nche Nọọmenti Independent (INEC) kwadoro nkwado iji hụ na ndị mmadụ nwere nkwarụ na usoro ntuli aka.
United States ga-emeghe Ụlọ Ọrụ Embasii na Obodo Jerusalem na May 14, iji kwekọọ na Ụbọchị Onwe Onwe nke Israel, ọnụ na-ekwuchitere Ụlọ Ọrụ Embassy nke Israel na Russia kwuru na Monday.
Nwunye nke onye isi oche, Oriakụ Dolapo Osinbajo, ekwusiri ike mkpa ọ dị inwe ọdịiche dị mma n'etiti ndị Naijiria, karịsịa ụmụ akwụkwọ.
Gov. Ibikunle Amosun nke Ogun agwawo ndị òtù 2,508 NYSC ka ha mee ka steeti ahụ nwee ohere iji tinye aka na-emetụta mgbalị.
2019: Nzuko okpukpe Northern na-ekwupụta ụbọchị 30 na-ebu ọnụ
Ụfọdụ ndị ụkọchukwu Kraịst na ndị Alakụba amalitela n'ekpere 30 ma na-ebu ọnụ iji rịọ enyemaka Chineke na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba n'ihu nhoputa ndi ochichi nke 2019.
Ndị isi agha ndị agha Iran na-atụ egwu ihichapụ Israel site na 2043
Ndị agha abụọ nke ndị agha France dọrọ Izrel aka ná ntị na ụbọchị ya gụchara ọnụ na na njedebe nwere ike ịbịa n'ihu 2043.
Arsene Wenger 'nwere obi ike' Jack Wilshere ga-abanye aka na Arsenal
Onye nchịkwa Arsenal Arsene Wenger kwuru na ya bụ "onye nwere obi ike" na midfielder Jack Wilshere ga-abanye na ụlọ ọrụ ọhụrụ.
Ndị uweojii jidere mmadụ asatọ a na-enyo enyo enyo na Katsina
Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii Katsina jidere mmadụ asatọ ndị a na-enyo enyo na ha na-atụ egwu ndị bi na steeti.
Ndị uwe ojii 28 na Turkey maka ndụ karịa 2016 dara
Akwukwo nke ndi agha 28 nyere ndi onu ogugu onu ogugu na Tuesday n'ime okwu ato di iche iche gbasara agha agha nke agha na 2016.